China 27mm Press Type Neck Pet Preform yeOiri Bhodhoro Inovhuvhuta fekitori uye vanotengesa | Dassaw
Kurema 18g, 25g, 28g, 35g, 40g, 43g, 55g, 60g, 70g, 80g
Isu takavimbika mugadziri, kunze kwenyika, uye mutengesi wemhando yepamusoro 27mm Neck Pet Preform yeMvura Bhodhoro / Muto Bhodhoro Rinovhuvhuta.
Izvi zvinopihwa preforms zvinogadzirwa uchishandisa yakakwira-giredhi PET uye epamberi tekinoroji mukuteedzera kune epasi rose mhando zviyero. Mafomu edu Akapihwa anoyedzwa kwazvo nenyanzvi dzedu pamatanho akasiyana ehunhu kuti vaone kusakwana kwavo. Izvi zvinowanikwa mumhando dzakasiyana uye mavara maererano nezvinodiwa nemutengi. Zvakare, vatengi vanogona kutenga izvi preforms pamakwikwi mutengo.
Preforms inogadzirwa kubva ku polyethylene terephthalate (PET), saka inonzi PET preforms. Ivo vanogadzira mashandiro enhando-chaiwo jekiseni kuumbwa maitiro pane zvishandiso kubva kune yepamusoro mhando vatengesi.
1.Tinogona kupa akawanda masimbi, mazhinji mavara.
2.Pet preform inogona kufuridzwa kubva 500ml kusvika 2.5L
3.Pet preform shandisa zvishandiso zvemhando yepamusoro uye pachena giredhi rekudya. Iyo yunifomu chaizvo uye yakaoma kuumbika, zviri nyore kuendesa.
4.Pet preform anoumba uye mavara zvinogona customized.
Pet preforms anoshandiswa kufuridza mabhodhoro emhuka epakeji. Ivo anonyanya kuiswa muCosmetic, chinwiwa, mamineral mvura, mafuta, mushonga uye mamwe mabhodhoro epakeji minda.
Pashure: 65mm Inodyiwa Oiri Pet Bhodhoro Preform Vagadziri MuChina - Dassaw
Zvadaro: 32mm Neck Pet Preform yeinodyiwa Oiri Bhodhoro